Galmada ammaanka ah Ee aan Cudur dhan arkeenin (Sir Muhiim ah) | Gaaloos.com
Home » galmada » Galmada ammaanka ah Ee aan Cudur dhan arkeenin (Sir Muhiim ah)
Xaaraanta Ha Fogow Kororso Aqoon Oo kaliya,Ha sababsan Warbixinta xayeysiin Nolosha.Macluumaadkan waxaa loo diyaariyey dadka Xalaasha Ku Galmooda.
Waxaad khatar ugu jirtaa inaad ka qaado STI wehelkasta qofkii sameeyey ama sameeya galmo aan ammaan ahayn qof kale.
Kala bixidu ma ammaanbaa?
Maya. Kala bixidu (kala bixida ka hor intaan manidu ka iman) ma aha ammaan sababtoo ah sababtoo ah qoyaanka galmada ayaa la siideyn karaa ka hor minada.
Galmada afku ma ammaanbaa?
Inkastoo galmada afka ay khatarteedu hooseyso xagga faafinta HIV, waxaad ku qaadi kartaa cudduro kale sidan, sida feyrasyo. Chlamydia iyo jabtada.
Waa inaad isticmaashaa wax kaa difaaca, ama iska ilaali inaad shahwo baxdo afka, marka:
• Labada qof midkood qabo boog calooleed ama ciridka oo dhiigaya: ama
• ay hadda caddaydeen ama ay dunta ilkaha isticmaaleen.
Waa maxay sababta aan u isticmaalayo konddhomska?
Kondhomisku waa difaaca wax ku ool ah oo kaa celinaya STIs badidooda, oo ay ku jiraan HIV, iyo iyagoo badanaa loo isticmaalo si ay uga hortagaan uurowga.
Qaar ka mid ah STIs sida feyraska, fiixda unugyada taranka iyo injirta, waxaa laga yaabaa in weli la faafiyo xitaa haddii la isticmaalo kondhom.
Sidee baan ugu isticmaalaa kondhomiska si sax ah?
Had iyo jeer:
• kukaydi kondhomiska meel yara qabow oo qalalan kana fog iftiinka qoraxda ee tooska ah.
• Isticmaal oo keliya condhomiska taariikhda dhicitaankooda horteed.
• U fur baakada si taxadar leh, oo iftiin fiican leh, si aadan u jeexin kondhomka, kuna furfur ilaa dhammaandka guska.
• Isticmaal saliid biyo badan leh.
Galmada aan lahayn saliid waxaa laga yaabaa inay jeexdo kondhomka. Ha isticmaalin kondhomiska leh saliida sida jeliga batrooka ama saliida ilmaha, oo debcineysa kondhomka.
• Hubi inaad kala soo baxdo guska intaadan lumin kacsanaanta, si uusan u dhicin kondhomko. Hay salka kondhomka markaad kala baxayso si aysan u dhixin in wax ka daataan.
• Dib ha u isticmaalin kondhomyada. ku rid sanduuqa qashinka.
Maxaa kale oo ilaalin ah oo la heli karaa?
Kondhomyada dumarka ayaa sidoo kale la heli karaa waana in lala isticmaalaa saliid. Way ka qaalisan yihiin aadna looma helo, laakiin dadka isqaba qaarkood waxay jecel yihiin inay isticmaalaan.
Ma la sameyn karaa galmo ammaan ah wehelkayga qaba STI, oo ay ku jirto HIV?
Haddii wehelkaagu qabo STI oo ay ku jirto HIV, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho hababka galmada ammaanka ah ee lagu dul maray waraaqdan yar si loo yareeyo khatarta aad ku qaadi karto. Waa inaad sidoo kale ka raadisaa tallo dhakhtarkaaga oo aad kala hadashaa whelkaaga galmada ammaanka ah.
Title: Galmada ammaanka ah Ee aan Cudur dhan arkeenin (Sir Muhiim ah)